IApartment yeStudio yaseMazantsi yePasifiki yoLwandlekazi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBella
Ngaba ujonge indawo yesitudiyo yokuhlala kwindawo yakho elandelayo? ungajongi ngapha kolu hambo lwaselunxwemeni olunemibono etshayelayo yolwandle. Relax, jonga kwaye uphumle. Ngesicwangciso esivulekileyo le studio yendlu ilala iindwendwe ezi-2 iyenza izibini ezigqibeleleyo zokurhoxa. Ukuba uceba ukuhamba nabanye unakho ukuhlala kunye ngelixa usonwabela indawo yakho njengoko kukho amagumbi amathathu amakhulu kwindawo enye ke sinento esinokuyinika bonke abahambi.
Esi situdiyo sesicwangciso esivulekileyo sale mihla sinekhitshi (ene-microwave, ifriji yebha, umatshini wekofu, izinto zokupheka kunye nesinki), igumbi lokuphumla, ibhedi yokumkanikazi, igumbi lokuhlambela kunye nebalcony. Le ndlu ineA/C ukuze uhlale ushushu kwaye upholile unyaka wonke.
IQ E L E
Unxweme loMzantsi alunqongophala lwamalwandle amahle, iindawo zokutyela, iikhefi kunye neendawo zokuphumla ezintle. Ngolwandle lweRacecourse njengendawo elahlayo unokusefa, ulobe intlanzi kwaye uhlambe nelanga kumxholo weentliziyo zakho. Konwabele ukuhamba kakuhle/iingoma zokuhamba ibhayisekile, iipaki & noovimba kunye ne-kayaking. Ukuba ujonge ukonwabela iglasi yewayini ke ungajongi ngaphaya kweCupitts Winery apho ungaphumla khona kwinduli enengca enembono yeenduli eziqengqelekayo okanye utye kwaye wonwabele imenyu emnandi abanayo. Iinketho zakho ngokwenene azinasiphelo.
B E D C O N F I G U R A T I O N
Ibhedi 1 - 1 x Queen ibhedi
I-Oceanfront Penthouse Apartment: (inqanaba eliphezulu) - inamagumbi okulala ama-2 kwaye ihlalisa iindwendwe ezi-5.
I-Oceanfront Garden Apartment: (ezantsi ekunene) - inamagumbi okulala ayi-3 kwaye ihlalisa iindwendwe ezisi-7.
I-Oceanfront Studio Apartment: (ezantsi ekunene) - yindlu ye studio eyilwe kakuhle ehlala iindwendwe ezi-2.
Nceda uqaphele ukuba le ndawo ayikuvumeli izilwanyana zasekhaya.
IPhilokhi yaseBella yoNxweme inomGaqo-nkqubo ongqongqo ONGAPHI NAWO . Zonke iindwendwe kufuneka zibe PHEZULU kweminyaka eyi-2 1 xa zibhukisha le ndawo, okanye zikhatshwe ngumzali/umgcini.
Ipropathi izimele kodwa ayibonelelwa. Iindwendwe ziyafuneka ukuba zize nazo zonke izinto zobuqu kunye neepantry. (Izinto zepantry ezisisiseko zinikiwe)
Ixabiso lixhomekeke ekutshintsheni kwaye ubuncinane bexesha lokuhlala lingafuneka.
*** Nceda uqaphele ukuba sifuna ibhondi yokhuseleko ye-500 yeedola kule ndawo. Olu gunyaziso lwangaphambili lwe-500 yeedola lufakwe kwikhadi lakho ngosuku olungaphambi kokufika kwakho kwaye lugcinwe iintsuku ezisi-7.***
a) I-Bella Coastal Property izamile ukugcina ukuchaneka komxholo kunye neewebhusayithi zabo. Nangona kunjalo amaxesha ngamaxesha imiba yomxholo inokuba ishiywe lixesha. Ulwazi oluthile lunikezelwa ngabanye kubandakanywa, abanini, kwaye ngenxa yoko asilwamkeli uxanduva lokuchaneka kwayo.
b) I-Bella Coastal Property, isebenza njenge-arhente enikezelayo egameni labanini kwaye ngokuhambelana nemiyalelo yabanini. I-Bella Coastal Property inelungelo lokuthatha amanyathelo afanelekileyo okulungisa kunye/okanye ukufuna imbuyekezo ngako nakuphi na ukwaphulwa okunzulu kwale miqathango yemvumelwano.
Ipropathi inayo iWifi yoncedo. Nceda uqaphele: I-Bella Coastal Property ayiyi kuthwala uxanduva lwako nakuphi na ukuphuma okanye ukunqongophala kweenkonzo ze-intanethi.
Umbuki zindwendwe ngu- Bella
Inombolo yomthetho: PID-STRA-18621